Friday, 12 January 2018 09:53
Finfinnee, Amajjii 4,2010- Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa baatii dhuftu keessa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuufi.
Waldaan Ergitoota Oomisha Hoortiikaalchara Ityoophiyaa agarsiisicha ilaalchisee ibsa laaten akka beeksisetti, dhaabbileen biyya keessaa fi alaa 120 ta’an waltajjicharratti ni hirmaatu.
Dabalataanis dhiyeessitoonni galteewwanii, gorsitoonni, bittoonnii fi qooda fudhattoonni ni hirmaatu jedheera.
Agarsiisa kanarratti hirmaattonni Awustiraaliyaa, Jaappaan, Ameerikaa, Kooriyaa Kibbaa, Awrooppaa, Baha Jiddugaleessaa, Afrikaarraa dabalatee biyyoota 40 olirraa ni argamu.
Waltajjichi damichaan Ityoophiaatti kan bobba’an jajjabeessuu fi muuxannoo dabalataa akka horataniif haala gaarii uuma jedhameera.
Mootummaanis invastimantichaaf karoora qabu dhaabbilee jajjaboof kan itti beeksifatu ta’a.(FBC)
Ityoophiyaatti proojaktiin dandamannaa hongee horsiisee bulaa Birriin miiliyoonni dhibba 4 oliin hojjetamaa jira
Torbe Kana 13992
Ji'a Kana 25388
01/05/07 irraa eggalee 8124543
Kan Amma Daawwachaa Jiran 14